ငါ့ခွေး colic ခံစားနေရပါသလား ဤရွေ့ကားရောဂါလက္ခဏာများ, ကုသမှုနှင့်ပိုပြီးများမှာ! | Dogs World
ငါ့ခွေး colic ခံစားနေရပါသလား
Encarni Arcoya | | ခွေးများ, ရောဂါများ
ကလေးလိုပဲ ခွေး colic ရန်အလွန်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ဖြစ်ကြသည် ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့သို့မဟုတ်ဝမ်းဗိုက်နာကျင်မှု အစာအိမ်အတွက်ဓာတ်ငွေ့စုဆောင်းခြင်းcolic သည်အထူးသဖြင့်ငယ်ရွယ်သောခွေးများကိုအကျိုးသက်ရောက်သောကြောင့်လူအများစုက၎င်းကိုအာရုံမစိုက်သင့်ဟုယူဆကြသော်လည်း၎င်းသည်၎င်းကိုအမြန်ဆုံးကုသရန်အရေးကြီးသည်။ ကျန်းမာရေးအတွက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည် နှင့်ငါတို့သူငယ်၏ဘဝ။
1 ဒါပေမယ့်ခွေးတစ်ကောင် colic ကဘာလဲ?
2 ခွေးအတွက် colic အမျိုးအစားများ
2.1 Acute colic
2.2 နာတာရှည် colic
2.3 အနာ colic
3 ခွေးများတွင် colic ၏အကြောင်းရင်းများဘာတွေလဲ
4 ခွေးများတွင် colic ၏လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
5 colic ၏ကုသမှု
6 colic နှင့်အတူခွေးများအတွက်သဘာဝကုစား
6.1 colic သက်သာရာမှဟင်းသီးဟင်းရွက်
7.6 သင်၏ Vet နှင့်ပုံမှန်စစ်ဆေးမှုများ
8 အူမကြီးပြproblemsနာများဖြစ်သည့် colic, torsion
ဒါပေမယ့်ခွေးတစ်ကောင် colic ကဘာလဲ?
colitis သို့မဟုတ် colic အူမကြီး၏ရောင်ခြင်းဖြစ်သည် သို့မဟုတ်ဤရောဂါမှမကြာခဏခံစားနေရသောတိရိစ္ဆာန်များဘယ်မှာအများအပြားအချက်များမှ မစင်အနည်းငယ်ကိုဖြတ်ကျော်ပါ ၎င်းတို့တွင်သွေးသို့မဟုတ်ချွဲပါဝင်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်သူတို့သည်မကြာခဏပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းနှင့်လေထဲမှထွက်လာခြင်းများကိုခံစားရသဖြင့်ချွေးနွေးရန်မသက်မသာဖြစ်စေသည်။
ခွေးတွေကပြတယ် အူမကြီးရောင်ရောဂါလက္ခဏာများအခြားရောဂါများသည်ဤရောဂါကြောင့်ပိုမိုဆိုးရွားနိုင်သည်ကိုတွေ့ရပြီးခွေးများမှာမူထိုထက်ပိုသောအရာများရှိသည် ပုံမှန် colitis မှကျရောက်နေတဲ့.
ခွေးထဲမှာ colitis: အကြောင်းရင်းများနှင့်ကုသမှု
ကောင်းသော အစားအစာနှင့် Anti-inflammatory ကုသမှု လုံလောက်သောဆီသို့ရှည်လျားသောလမ်းကိုသွားပါလိမ့်မယ် ရောင်ရမ်းခြင်းကိုလျှော့ချ နှင့်ဤရောဂါကိုမကြာခဏခံစားနေရသောခွေးများကဲ့သို့အူရောင်ရောဂါထပ်မဖြစ်ရန်တားဆီးပါ anti-inflammatories လိုအပ်ပါတယ်အနည်းဆုံးဤအစတွင်ဤဆေးများသည်ရောင်ရမ်းခြင်းကိုမြန်ဆန်စေပြီးလက်တွေ့လက္ခဏာများတိုးတက်စေသည်။
ခွေးအတွက် colic အမျိုးအစားများ
အများဆုံးကိစ္စများတွင် colitis သို့မဟုတ်စူးရှသော colic, ခွေးရုတ်တရက်နေမကောင်းဖြစ်လာပြီးကတည်းကကတည်းကမခံနိုင်သောရာသီဥတုကဲ့သို့သောအခြေအနေများအားဖြင့်အကြောင်းပြချက်များပေးနိုင်ပါသည် ခွေးအပူမှအလွန်အထိခိုက်မခံဖြစ်ကြ၏ထို့ကြောင့်များသောအားဖြင့်မခံနိုင်လောက်သောပူပြင်းသည့်အခြေအနေများနှင့်ထိတွေ့ခြင်းခံရသည် သူတို့ကိုနေမကောင်းစေသည် နှင့် colic ၏ဤအမျိုးအစားကိုခံစားကြရသည်။
ရောဂါလည်းဖြစ်နိုင်သည် ထိုကဲ့သို့သောပိုးကောင်များအဖြစ်ကပ်ပါးကောင်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့, ထိုအမှိုက်သရိုက်ကနေကိုစားနိုင်ခဲ့သောကြောင့်, ထိုခွေးရဲ့စနစ်အပေါ်ဖြန့်ဝေ ပုပ်နေသောအစာခွေးကလေးသည်ထိုနေရာ၌နေထိုင်သောကြောင့်၎င်းသည်သာမကဘဲ၎င်းသည်ဖြစ်ပွားနိုင်သည် sananitary အခြေအနေများ.
El စူးရှ colic ခွေးများတွင်များသောအားဖြင့်တိရိစ္ဆာန်ဆရာဝန်ကညွန်ကြားထားသည့်ဆေးခန်းတိုလေးများဖြင့်ကုသလေ့ရှိသည်။
ဤအချိန်အတောအတွင်းခွေးကိုအစာကျွေးသင့်သည် အစားအစာများကိုကြေညက်ရန်လွယ်ကူသည်။ သို့သော်အသားကုန်ကြမ်းများကိုဖြစ်နိုင်သမျှများများရှောင်ရှားသင့်သည် ဆီအနည်းငယ်နှင့်အသားပြုတ် ရေနံစိမ်းအတွက်သင့်လျော်သောအခြားရွေးချယ်စရာ။
ဒီအဖြစ်အပျက် ခွေး colic ထံမှရက်သတ္တပတ်အတော်ကြာခံစားနေရသည့်အခါတွေ့ရှိနိုင်ပါသည် သို့မဟုတ်လပေါင်းများစွာရောဂါလက္ခဏာများပြန်ပေါ်လာပြီး ပို၍ ပြင်းထန်လာနိုင်သည်။ colic ၏စဉ်ဆက်မပြတ်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း၏အခြားအကြောင်းပြချက်ရိုးရှင်းသောကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည် ခွေးအစားအစာဓာတ်မတည်အစားအစာတွင်ဓာတုပစ္စည်းများနှင့်အတုပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသော။
ဒါကြောင့်သင်သတိထားရမယ် colitis သို့မဟုတ် colic ကတည်းကပြီးသားနာတာရှည်ဖြစ်ကြသည် ဒီရောဂါသေစေနိုင်သည် လုပ်နိုင်တဲ့များအတွက်။
ဒီ colic အမျိုးအစားကိုလည်းအဖြစ်လူသိများသည် လက်ဝှေ့ထိုး colitis ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီခွေးမျိုးပွား Boxer ဟာအလွန်ကျက်သရေရှိတယ်။
La အနာ colitis ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်နာကျင်မှုတွေအများကြီးခံစားနေရစေသည်နှင့် အရေဖျားစဉ်အတွင်းသွေးထွက်ဒီရောဂါခံစားနေရတဲ့ခွေးတွေမှာအူမကြီးထဲမှာရှိတဲ့ဘက်တီးရီးယားတွေကိုခုခံအားစနစ်နိမ့်ကျတယ်လို့ယုံကြည်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကြီးလေးတဲ့အခြေအနေကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။
ဒီရောဂါနှင့်အတူခွေးများ သူတို့က2နှစ်အရွယ်မှနိမိတ်လက္ခဏာကိုပြသနိုင်ဖို့စတင် နှင့်ဤရောဂါလက္ခဏာများအသက်အရွယ်နှင့်အတူပိုဆိုးလာ။
ကူးစက်ခံသည့်ခွေးများ အနာ colitis ထိုကဲ့သို့သောကဲ့သို့သောသမားရိုးကျ Anti-inflammatory မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုကောင်းစွာတုံ့ပြန်ကြဘူး metronidazole သို့မဟုတ် tylosin sulfasalazineခွေးများတွင်ပုံမှန် colic ဓာတ်များပါ ၀ င်သည် rofရာဝတီ ၎င်းသည်ခွေးများ၏အခြေအနေကိုချက်ချင်းတိုးတက်စေသည့်ပantibိဇီဝဆေးအနည်းငယ်ထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဤပantibိဇီဝဆေးသည်ထိရောက်မှုအရှိဆုံးဖြစ်သည် အနုတ်လက္ခဏာဘက်တီးရီးယားသတ်ပစ် colic ၏အဓိကအကြောင်းရင်းများမှာ။
ခွေးများတွင် colic ၏အကြောင်းရင်းများဘာတွေလဲ
Colic ဖြစ်ပါတယ် အဓိကအားဖြင့်အစားအစာအမျိုးအစားကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ ငါတို့ရဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကိုငါတို့ပေးတယ်၊ မင်းကမင်းရဲ့တိရစ္ဆာန်ကိုမမှန်မကန်တိုက်ကျွေးတယ်ဆိုရင် ပျက်စီးယိုယွင်းသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်ပြိုကွဲဖြစ်နိုင်သည်ထုတ်ကုန်နှင့်အတူအမှိုက်သရိုက်နှင့်အတူ ပိုးသတ်ဆေးသို့မဟုတ်အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေပစ္စည်းများနှင့်အတူညစ်ညမ်း သို့မဟုတ်အဆိပ်ဖြစ်စေသောဤအနှောင့်အယှက်ဝမ်းဗိုက်နာကျင်မှုထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
အလားတူပင် colic လည်းကြောင့်ဖြစ်ပွားနိုင်သည် ဗိုင်းရပ်စ်သို့မဟုတ်ဘက်တီးရီးယားကူးစက်မှု.
သင့်ခွေး၏အစာအာဟာရကိုရုတ်တရက်ပြောင်းလဲခြင်းက၊ ဝမ်းလျှောသို့မဟုတ် colic ၏ရင်ဆိုင်တွေ့ဆုံခြင်းခွေး၏အစာခြေလမ်းကြောင်းသည်လူတို့၏အစာခြေလမ်းကြောင်းထက်ဤအပြောင်းအလဲများကို ပို၍ ဆိုးရွားသည်။
အဲ့ဒါကိုခေါ်တယ် ဝမ်းလျှော '' လိုက်လျောညီထွေ '' အတွက်ဘုံဖြစ်ပါတယ် ခွေး သင်၏ခွေးနှင့်ခွေးကလေး၏အစားအစာတွင်သိသာထင်ရှားသောပြောင်းလဲမှုကိုတဖြည်းဖြည်းလုပ်ဆောင်သင့်သည် ဖြစ်၍ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဗျူဟာမြောက်နေဆဲဖြစ်သည်သို့မဟုတ်သူတို့အိမ်အသစ်သို့ရောက်သောအခါအစားအသောက်များကိုရုတ်တရက်ပြောင်းလဲခြင်းမှခံစားနေရသောသူများဖြစ်သည်။
ဤအစာအာဟာရပြောင်းလဲမှုသည်တစ်ပါတ်ကြာပြီးဖြစ်သည် အသစ်သောအစားအစာကိုအဟောင်းနှင့်အတူရောမွှေပါ အစားအစာအသစ်၏အကျိုးအတွက်၎င်းပမာဏကိုတဖြည်းဖြည်းလျှော့ချရန် အူလမ်းကြောင်းфлора သင့်ခွေးသည် ၀ မ်းပျက်ဝမ်းလျှောရောဂါမခံစားရဘဲအစားအစာအသစ်နှင့်လျင်မြန်စွာလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်လိမ့်မည်။
သင့်ရဲ့ခွေးသိပ်စားလျှင်သို့မဟုတ်သူကိုစားလျှင် မစားနိုင်သောအစားအစာ (အစာ၊ အရိုး၊ နို့စသည်တို့ကျန်ရှိသည်။ ) သင့်တွင်ဝမ်းလျှောရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်ခြေပိုမိုမြင့်မားသည်။ နွားနို့ရဲ့နို့ကမသင့်တော်ဘူး အများကြီးလျော့နည်းခွေးပေါက်စသည်အဘို့, ကတစ် ဦး အမျိုးအစားကင်းမဲ့ lactase ကိုခေါ်အင်ဇိုင်းအစားအစာကိုအစာကြေစေနိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။
အတူတူပါပဲဖြစ်ပျက် ကစီဓါတ်ပါသောအစားအစာများကတည်းကကတည်းက undercooked အာလူးနဲ့တူ အူထဲမှာဓာတ်ကစော်ဖောက်ခြင်း ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခွေးကသူတို့ကိုအစာကြေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး၊
အပြင်ပါရှိသောအစားအစာများ အရည်အသွေးနိမ့်ပရိုတိန်း၀ မ်းလျှောခြင်းကိုလည်းဖြစ်စေနိုင်သည် ညံ့ဖျင်းသောအစာခြေ ဤပရိုတိန်းအမျိုးအစားကြောင့်ဖြစ်ရခြင်း၊ ၎င်းသည်စက်မှုအရည်အသွေးနိမ့်ကျသောအစားအစာများနှင့်အရိုးနုနှင့်အရိုးတို့ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
အဆိုပါနေထိုင်သောကပ်ပါးကောင် အစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်း ၏စိတ်ပျက်စရာအချက်များဖြစ်ကြသည် အစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်း mucosaအထူးသဖြင့်ဤကပ်ပါးကောင်များစွာရှိသည့်အချိန်တွင်၎င်းသည်ပြင်းထန်သောကိုလက်ဆီများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
ထို့ကြောင့်၊ သင်၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်သည်ပုံမှန်သောက်ရန်အရေးကြီးသည် ပြည်တွင်းရေး antiparasite ဤအစာခြေရောဂါများကိုရှောင်ရှားရန်, နိုင်ဖြစ်ခြင်း ခွေးပေါက်လျှင်လတိုင်းယူပါ နှင့် (၃) လမှ (၆) လတိုင်း (နွေ ဦး ရာသီနှင့်ဆောင်း ဦး ရာသီ) တွင်ခွေးသည်အရွယ်ရောက်ပြီးသူဖြစ်သည့်အချိန်တွင်ဖြစ်သည်။
ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်အချို့သောဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ရိုတာဗိုင်းရပ်စ်၊ ပါဗိုဗိုင်းရပ်စ်၊ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် နှင့်ကဲ့သို့သောဘက်တီးရီးယား Salmonella နှင့် / သို့မဟုတ် Campylobacter အစာခြေခြင်းဆိုင်ရာရောဂါများအတွက်တာဝန်ရှိသည်၊ သို့သော်အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောအချို့ကိစ္စများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ပြောစရာရှိသည် အလွန်ထိရောက်သောကာကွယ်ဆေးများparvovirus သို့မဟုတ် distemper နှင့်အတူဖြစ်သကဲ့သို့။
အခြားဖြစ်ရပ်များတွင်ဤဗိုင်းရပ်စ် (သို့) ဘက်တီးရီးယားရောဂါများကိုကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းမရှိသောကြောင့်ဆောင်းရာသီတွင်ခွေးများတွင်အူမကြီးရောဂါဖြစ်ပွားမှုများသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အလွန်သတိထားရမည်။
colic ဖြစ်ပေါ်စေသောအဆိပ်အတောက်များ, ကတည်းက အချို့သောအပင်များတွင်အစာခြေလမ်းကြောင်းမှအမျက်ဒေါသများပါရှိသည်ထိုကဲ့သို့သောစေးနှင့် Laurel ficus အဖြစ်။
ခွေးများတွင် colic ၏လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
သင်သည်သင်၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တစ် ဦး ရှိမရှိပြောပြရန်မည်သို့မည်ပုံစဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင် ဝမ်းဗိုက် colic သငျသညျသူ၏အပြုအမူကိုအနီးကပ်အာရုံစိုက်သင့်ပါတယ်။ သတိထားမိမယ်ဆိုရင် အဆင်မပြေသို့မဟုတ်နာကျင်မှုနှင့်အတူချဂရုမစိုက် သင်ဝမ်းဗိုက်touchရိယာကိုထိသည်နှင့်တပြိုင်နက်, သင်ကဖြစ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံး VETT သို့ယူရန်အရေးကြီးပါသည်, ဒါကြောင့်သူကတကယ်တော့ colic ဟုတ်မဟုတ်သို့မဟုတ်အခြားရောဂါရှိမရှိစိစစ်နိုင်သူသည်။
အထူးကုဆရာ ၀ န်နှင့်ရောဂါရှာဖွေဖော်ထုတ်ရန်အတွက်မပါ ၀ င်သင့်သည့်ဂရုတစိုက်စစ်ဆေးမှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်လိမ့်မည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစာမေးပွဲသွေးနှင့်ဆီးနမူနာများနှင့်ဇီဝဓါတုဗေဒဆိုင်ရာအချက်အလက်များပင်ဖြစ်သည်။
မစင်များမကြာခဏဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်သို့မဟုတ်ပိုမိုကြီးသည်နှင့်မကြာခဏအာရုံစူးစိုက်မှု - ဆွဲဆောင်ပျော့သို့မဟုတ်အရည်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။
အချို့ကိစ္စများတွင်ခွေးသည်ကိုယ်စားပြုသည် အော့ နှင့်ဤအဖြစ်လူသိများသည်
မကြာခဏတိရစ္ဆာန်လည်းရှိပါတယ် အစာခြေ spasms (colic) နှင့်ခဲဝမ်းရှိပေမည်။
သူတို့မှီခိုသောကြောင့်ဤအစဉ်အမြဲပစ္စုပ္ပန်မဟုတ်ပါ colic ၏အကြောင်းရင်း အချို့ကိစ္စများတွင်သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ရှိကောင်းရှိနိုင်သည် အဖျား နှင့်သင်ပင်ပန်းရှာပါ။
၀ မ်းလျှော ၀ မ်းကွဲသည့်ခွေးတစ်ကောင်သည်အစာစားရန်ငြင်းဆန်လေ့ရှိပြီးအရက်အလွန်အကျွံသောက်လေ့ရှိပြီးအော့အန်ခြင်းဖြင့်ရောဂါကိုပိုမိုဆိုးရွားစေနိုင်သည်။
colic အလွန်အရေးကြီးသည်နှင့်ရက်ပေါင်းများစွာကြာရှည်လျှင်, သင့်ရဲ့ခွေးကိုရေခန်းခြောက်စေနိုင်သည်, ဝမ်းလျှောဝမ်းလျှောနှင့်အတူခွေးပေါက်စ၏အမှု၌မကြာခဏဖြစ်ပျက်တစ်ခုခု။
ယူရန်အဓိကအတိုင်းအတာဖြစ်သည် ၂၄ မှ ၄၈ နာရီအထိအစာစားရန်ခွေးကိုထားပါ ရောဂါကိုလေ့လာပြီးနောက်အူသိမ်သည် mucosa အရွက်အဖြစ်အသုံးပြုသည် "အနားယူ" ။
စားနပ်ရိက္ခာထောက်ပံ့မှုပြန်လည်စတင်မှုသည်တဖြည်းဖြည်းချင်းလုပ်ဆောင်ရပြီးပေးရမည့်အရာဖြစ်သည် ချက်ပြုတ်ထားသောကြက်သားနှင့်မုန်လာဥကဲ့သို့သောအစာအာဟာရများ။ ထိုအစားအစာများကိုတစ်နေ့တာလုံးဖြန့်ကျက်ထားသည့်သေးငယ်သောအစာများဖြင့်ပေးသင့်သည်။
၀ မ်းပျက်ဝမ်းလျှောခြင်း၏ပြင်းထန်မှုနှင့်အကြောင်းရင်းပေါ် မူတည်၍ သင်၏ VET သည်အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးကိုသတ်မှတ်လိမ့်မည် မူးယစ်ဆေးဝါးများ:
လိမ်းဆေးများ: ဒီဆေးအမျိုးအစားကိုအူသိမ်အင်္ကျီလို့ခေါ်တယ်။ သူတို့ကိုနှုတ်ဖြင့်အုပ်ချုပ်ပြီးဘက်တီးရီးယားအဆိပ်များကိုစုပ်ယူရန်အစာခြေလမ်းကြောင်း၏နံရံတစ်လျှောက်တွင်ဖြန့်ဝေပေးလိမ့်မည်။
အသွားအလာထိန်းညှိ: ၀ မ်းပျက် ၀ မ်းလျှောရောဂါပြင်းထန်လျှင် ၀ မ်းပျက်ဝမ်းလျှောခြင်းကိုဆက်လက်မတားဆီးနိုင်ပါ။
ပဋိဇီဝဆေး: ခွေးမှာသိသာထင်ရှားတဲ့ရောဂါလက္ခဏာမတွေ့ရရင်ဒါမှမဟုတ်ဘက်တီးရီးယားအူမကြီးရှိရင်သူတို့ကအမြဲတမ်းအသုံးဝင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီလိုဆိုရင်တော့အူလမ်းကြောင်းပိုးသတ်ဆေးကိုတိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်ကသတ်မှတ်လိမ့်မယ်။
ရေဓာတ်: ပြင်းထန်သော ၀ မ်းပျက်ဝမ်းလျှောရောဂါအထူးသဖြင့်ခွေးပေါက်စများ၌၎င်းသည်လုံးဝလိုအပ်သည်။ ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းအားနှုတ်ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သော်လည်းပြင်းထန်သောအခြေအနေများတွင်သွေးသွင်းရန်လိုအပ်သည်။
၀ မ်းပျက် ၀ မ်းလျှောရောဂါဖြစ်ပွားခြင်းမှာများသောအားဖြင့်ကုသမှုသည်သင်၏တိရိစ္ဆာန်ဆရာမှလေ့လာသောလက်တွေ့လက္ခဏာများနှင့်ပြင်းထန်မှုပေါ်တွင်မူတည်သည်။
colic ကိုကုသရန် (ထပ်တလဲလဲဖြစ်ပွားမှုများအထူးသဖြင့်နာတာရှည်) တွင်သင်၏ခွေးတစ်ကောင်သည် a) ခံရန်အရေးကြီးသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစာမေးပွဲ အခြေခံအကြောင်းတရားများကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ပြီးကုသနိုင်အောင်။
သို့သျောလညျး သဘာဝကကုစား Colic ၏မသက်မသာလက္ခဏာများကိုသက်သာစေရန်ဆေးဖက်ဝင်အပင်များအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။
သောဟင်းသီးဟင်းရွက် carminatives (ဆိုလိုသည်မှာအစာအိမ်ကြွက်သားများကိုဖြေလျှော့ပေးသောဆေးပင်များနှင့် အူလမ်းကြောင်းဓာတ်ငွေ့သက်သာ) ပိုလျှံဓာတ်ငွေ့ဖယ်ရှားခြင်းနှင့်ရပ်တန့်ဘို့အသုံးဝင်ပါသည် ခွေးထဲမှာအူ။ သင့်ခွေးကိုအလွယ်တကူနဲ့ဘေးကင်းစွာကူညီနိုင်သည့် carminative ဆေးပင်အချို့ကိုဒီမှာဖော်ပြထားသည်။
အကယ်၍ သင့်ခွေး၏ Colic သည်ရောင်ရမ်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်ရလျှင်အောက်ပါဆေးများသည်အလွန်အထောက်အကူပြုသည်။
ဒီဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေရှိတယ် ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့် mucilaginous ဂုဏ်သတ္တိများအလွန်ထိရောက်သောဖြစ်ခြင်း ရောင်ရမ်းခြင်း၏လျှော့ချရေး အတွင်းပိုင်းနှင့်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ရှိသက်သောင့်သက်သာမရှိခြင်း၊ ချောဆီအရည်များနှင့်စိုစွတ်သောအမြှေးပါးများအကြားအကာအကွယ်အတားအဆီးဖြစ်သည့်အပြင်အစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့မှုများနှင့်ယားယံခြင်းအတွက်အထောက်အကူပြုသောအရာများဖြစ်သည်။
သင့်ခွေး၏ Colic သည်a။ ကြောင့်ဟုသင်သံသယရှိပါက အနာဤဟင်းသီးဟင်းရွက်များသည်အဆင်သင့်ဖြစ်လိမ့်မည်။
သကြား ဆဲလ်ကြီးထွားမှုကိုလှုံ့ဆော်, အစာအိမ်နံရံကာကွယ်ပေးသည်နှင့်အနာသက်သာ။
ချော elm အေးဆေးတည်ငြိမ်သောနှင့်အစာအိမ်နံရံကာကွယ်ပေးသည် နှင့်အစာခြေလမ်းကြောင်းနှင့်ရှားစောင်းလက်ပတ်ဖျော်ရည် ပျို့ချင်မှုကိုကာကွယ်ပေးသည် နှင့်အနာပိုမြန်အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေကူညီပေးသည်။
အကယ်၍ အချို့ ဘက်တီးရီးယား၊ ဖန်းဂတ်စ်သို့မဟုတ်ကပ်ပါးပိုးကူးစက်မှု သင့်ခွေး၏အူမကြီး၏အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည့် licorice အမြစ်သည်အလွန်အသုံးဝင်လိမ့်မည်။
ယခုအခါသင်သည်ခွေးများတွင် colic နှင့်ပတ်သက်သည့်အရာအားလုံးကိုသိပြီ ဖြစ်၍ သင်၏အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်ကိုဖြတ်သန်းစေလိုသည့်အခြေအနေမဟုတ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သိလာပြီ။ ထို့ကြောင့်ပြtheနာကိုဖြေရှင်းမည့်အစားယင်းကိုရှောင်ရှားရန်စဉ်းစားပါလေ။ တကယ်တော့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းသင်လျှောက်ထားနိုင်တဲ့အကြံပြုချက်များအများကြီးရှိပါတယ် သူတို့ colic တားဆီးဖို့ဝတ်ပြုကြလော့။ ဤအကြံပြုချက်အားလုံးကိုသင့်ခွေး၌မတွေ့ရဟုမဆိုလိုပါ၊ သို့သော်သူတို့ထံမှသူတို့ခံစားနေရသောဝေဒနာသည်မှာပိုမိုရှုပ်ထွေးပါသည်။
ယခုစျေးကွက်တွင်စျေးနှုန်းအမျိုးမျိုးဖြင့်အစာအမျိုးမျိုးစားသုံးနေကြသည်။ ထိုအရာအားလုံးသည်အတူတူပင်ဖြစ်ပုံရသော်လည်း၎င်းတို့သည်မဟုတ်ပါ။ တကယ်တော့ကျွမ်းကျင်သူများကိုယ်တိုင်၏အဆိုအရခွေးမကျေနပ်စေသည့်အရာသည်၎င်း၏အင်္ကျီကိုမတောက်ပစေဘဲတက်ကြွပုံမပေါ်သည့်အစာသည်ကောင်းမွန်သောအစာမဟုတ်ပါ။ ဒါ့အပြင် အစားအစာညံ့ဖျင်းခြင်းသည်သင့်ခွေးကိုဖျားနာစေနိုင်သည်။ ပြီးတော့ colic ကခွေးတွေထဲဝင်လာတယ်။
ထို့အပြင်မသင့်တော်သော၊ အာဟာရဓာတ်အားလုံးမပါ ၀ င်သော၊ အရည်အသွေးနှင့်မျှတသောအစားအစာကိုထောက်ပံ့ပေးသောအစားအစာသည်အူမကြီးကင်ဆာနှင့်အခြားရောဂါများကိုဖြစ်ပွားစေနိုင်သည်။ U.S ငါတို့သည်ဤအစာကျွေးခြင်းအမျိုးအစားကိုအကြံပြုပါသည် မင်းကျန်းမာရေးကောင်းပြီးအာဟာရလိုအပ်ချက်တွေကိုကောင်းစွာဖုံးအုပ်နိုင်အောင်။
ဒါကဘုံဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျအစာကျွေးခြင်း၏ကုန်ပြီ, ဒါမှမဟုတ်သင်အနည်းငယ်သာကျန်ကြွင်း, သင်ကမ်းလှမ်းမှုမြင်ကြပြီးသင်အဘို့အသွား။ သငျသညျပုံမှန်အစာကျွေးခြင်းပြီးအောင်နှင့်အခြားတ ဦး တည်းထားတော်မူ၏ ပြီးတော့သူမစားဘူး။
ပထမ ဦး စွာသင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်၏အစားအစာကိုပြောင်းလဲသောအခါသင်ဖြည်းဖြည်းချင်းပြုလုပ်ရမည်။ အကြောင်းပြချက်မှာ, သင်၏အစားအစာတွင်ရုတ်တရက်ပြောင်းလဲမှုရှိလျှင်သင်၏အစာခြေစနစ်သည်သည်းမခံနိုင်ပါ, သူသည်သူမစားသောအစားအစာကိုမပေးမချင်းအစာမစားနိုင်ပါ။
အကယ်၍ သင်အမှတ်တံဆိပ်များကိုပြောင်းလဲမည်ဆိုပါကထိုပြောင်းလဲမှုကို ၂ ပတ်မှ ၄ ပတ်အကြားပြုလုပ်ရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သို့မှသာခွေးသည်၎င်းကိုအကျွမ်းဝင်ပြီး colic (သို့) ငြင်းပယ်ခြင်းပြcauseနာများဖြစ်စေနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
စားစရာအချို့ကျန်ရှိနေသေးသည့်အခါသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့အစားအစာကိုလွှင့်ပစ်လိုက်သောအခါခွေးများသည်လမ်းလျှောက်နေသောအမှိုက်သရိုက်များရှိလိမ့်မည်။ ဆိုလိုတာကသူတို့ကစားတယ်။ သူတို့အတွက်၎င်းသည်သကြားလုံးနှင့်တူသည်၊ အကြောင်းမှာ၎င်းသည်ပုံမှန်မဟုတ်သောကြောင့်အရသာ၊ အရောင်၊ သူတို့အမြဲစားသောအရာမှကွဲပြားခြားနားသည်။
ဒါပေမဲ့ အထူးသဖြင့်သင့်တွင်အူမကြီးသည့်ခွေးတစ်ကောင်ရှိလျှင်၎င်းသည်မသင့်တော်ပါ။ အခုတော့ငါဟာဘယ်အစားအစာနဲ့ဘယ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းကိုမဆိုတားမြစ်ဖို့မပြောတော့ဘူး။ ဥပမာအားဖြင့်ဝက်ပေါင်ခြောက်တစ်ချောင်းသည်သင့်ကိုနာကျင်မည်မဟုတ်။ ဒါပေမယ့်တစ်ဝက်စားကြက်သားပေါင်, က၎င်း၏အရိုးနှင့်အားလုံးဟုတ်ကဲ့ (ဒါကြောင့်လည်းစအိုအူကျစေသောဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါ၎င်းသည်ရွှေ့ပြောင်းမရသောကြောင့်အရေးပေါ်လည်ပတ်မှုရှိသည်ကြောင့်) ။
ယေဘုယျအား ကျွန်တော်တို့စားတဲ့အစားအစာဟာခွေးအစာအိမ်အတွက်မသင့်တော်ပါ။ အမွှေးအကြိုင်၊ ဆား၊ သကြားသည်အန္တရာယ်ဖြစ်စေသောကြောင့်သင့်အစာခြေစနစ်ကိုပျက်စီးစေနိုင်သည့်အပြင်အခြားပြgiveနာများဖြစ်စေနိုင်သောအခြားအစားအစာများကိုအထူးသတိထားရန်လိုအပ်သည်။
ခွေးများသည်များသောအားဖြင့်များစွာသောရေကိုသောက်ကြသည်။ ဒါဟာသူတို့ hydrate လမ်းဖြစ်၏, ဒါပေမယ့်သူတို့ကတစ် ဦး အဖြစ်လည်းလုပ်ပါ သူတို့အစာအိမ်ပြproblemsနာများသည့်အခါကူညီပေးသည်။ ထို့ကြောင့်ရေသည်အမြဲတမ်းရရှိနိုင်ပြီးသင်၏အစာအိမ်ထဲ ၀ င ်၍ သင့်အားအနာရောဂါဖြစ်စေသောကပ်ပါးကောင်များကိုအခြားပြamongနာများမှရှောင်ရှားရန်လတ်ဆတ်သန့်ရှင်းသည်။
မင်းခွေးကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးသူကသူ့ကို“ ဆက်ဆံမှု” ပေးတဲ့သူကိုချဉ်းကပ်လိုက်တယ်၊ ဒါမှမဟုတ်ပိုဆိုးတာကစွန့်ပစ်လိုက်တဲ့အရာတစ်ခုခုကိုမြင်ပြီးစားလိုက်တာ။ ၎င်းသည်သင်လုပ်နိုင်သမျှအဆိုးဆုံးဖြစ်သည်၊ သို့သော်ဖြေရှင်းနည်းရှိသည်။ အိမ်အပြင်ဘက်၊ မြေပြင်နှင့်သူစိမ်းများထံမှအစာမစားရန်သူ့ကိုသင်ပေးပါ။
သင့်ရဲ့ခွေးခံစားရလိမ့်မည်ဟု colic အများအပြားရှိပါတယ်, သင်ကသူတို့ကိုရှောင်ရှားရန်ကြိုးစားဘယ်လောက်ပဲနေပါစေသင်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ အခြားခွေးများနှင့်ထိတွေ့ခြင်း၊ မသင့်လျော်သောနေရာများတွင်သောက်သုံးရေ သူတို့ရဲ့ဖြစ်ပျက်မှုသြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်ပါတယ်။
သင်၏ Vet နှင့်ပုံမှန်စစ်ဆေးမှုများ
ခွေးကောင်းရင်တိရစ္ဆာန်ဆေးရုံကိုခေါ်သွားလေ့မရှိဘူး။ သူနေမကောင်းတာကိုမတွေ့ရသေးခင်မင်းမသွားဘူး။ ထိုပြaနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကျန်းမာရေးကိုအကဲဖြတ်ရန်ဆရာဝန်များကိုအသုံးပြုသကဲ့သို့ခွေးများနှင့်လည်းအလားတူပြုလုပ်ရန်အကြံပြုပါသည်။
ဒါဟာသင်မကြာခဏဝတ်ဆင်ရန်ရှိသည်မဆိုလိုပါ, ဒါပေမယ့် ဟုတ်ကဲ့နှစ်ပတ်လည်လည်ပတ်မှုအကြံပြုပါသည် နှင့်ပြproblemsနာများသို့မဟုတ်နှစ်များကုန်လွန်သွားပါကဤလည်ပတ်မှုများကိုခြောက်လတစ်ကြိမ်ပြုလုပ်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အနေဖြင့်သူဖြတ်သန်းသွားသောအခြေအနေအချို့ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပြီးပိုမိုဆိုးဝါးလာသည်အထိကုသပေးနိုင်ပါသည်။
အူမကြီးပြproblemsနာများဖြစ်သည့် colic, torsion
အများအပြားရှိပါတယ် colic မှခံစားရနိုင်ကြောင်းခွေးဝတ်ရည်။ တကယ်တော့၊ သေးငယ်တဲ့ခွေးများခွေးများသည်အစာခြေပြhaveနာများပိုများတတ်သည်ဟုယူဆကြသော်လည်းအမှန်တရားမှာမူထိုသို့မဟုတ်ချေ။ ဥပမာအားဖြင့်, Boxer အစာအိမ် colic ခံစားနေရပြီးအများဆုံးဖွယ်ရှိသောခွေးတစ် ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျာမန်သိုးထိန်းတစ် ဦး၊ Dane Great Saint (သို့) Saint Bernard တို့ပင် colic သို့မဟုတ်အစာအိမ်ယိုခြင်းကဲ့သို့အစာခြေခြင်းပြproblemsနာများရှိသည်။
ယေဘူယျအားဖြင့် ခွေးကြီးများနှင့်အသေးစားခွေးများသည်အစာခြေပြproblemsနာအများဆုံးရှိသည် သူတို့ပေးနိုင်တယ်။ colic ရုံသာမကအခြားပျော့ပျောင်းသောသို့မဟုတ် ပို၍ လေးသောပြproblemsနာများ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခွေးကမ္ဘာကြီး » အထွေထွေခွေးများ » ခွေးများ » ငါ့ခွေး colic ခံစားနေရပါသလား
Carol Florez ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်တော့်ခွေးကလေးကအဆက်မပြတ်ကိုလိုကလီးယားရောဂါခံစားနေရတယ်၊ သူကကျွန်တော့်ကိုသွေးနမူနာယူဖို့အကြံပေးတယ်၊ သူအကြံပေးတဲ့အတိုင်းလိုက်မယ်၊
carolina florez သို့ပြန်သွားရန်
Linda Escobar ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်၏ခွေးသည် ၂၈ ရက်ရှိပြီးအစာအိမ်ကြွက်တက်ခြင်းကိုကူညီသည်။ ငါပေးမယ် Vet ကသူမကို ၁ ရက်မြောက်နေ့မှာကြည့်ပြီးအရာအားလုံးပြီးသွားပြီလို့ပြောတယ်။ ဒါပေမယ့်သူနေဆဲ colic ရှိပြီးအများကြီးနောင်တရ။ ငါသူမ ablle VET သို့သွားစေခြင်းငှါသူမကငါသူ့ကိုလုယူပြီဟုဆိုသည် ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ။
Linda Escobar အားပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်ုပ်၏ခွေးသည်အသက် ၁၁ နှစ်သာရှိသေးသောလွန်ခဲ့သော ၁၁ နှစ်ကဖြစ်ပြီး၊ လွန်ခဲ့သောတစ်လကသူသည်ချောင်းဆိုးခြင်းများနှင့်စတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ သူမတွင်ကောင်းမွန်သောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုရှိသည်။ အူမကြီး၌တည်၏။ သူ့ကို biliary colic အတွက်ဆေးပေးထားသော်လည်းတိုက်ခိုက်မှုများကသူ့ကိုအနည်းငယ်မျက်စိကန်းစေခဲ့သည်။ ငါသူ့ကိုသူ့ကိုဗိုက်ပေးတဲ့အခါအရမ်းခက်လာတယ်၊ ငါဘာလုပ်ရမလဲ။
မင်္ဂလာပါကျွန်တော့်ခွေးကလေးဟာ chitzu ပါ။ သူမအစာအိမ်နာကျင်မှုနဲ့အတူမနေ့ကကတည်းကသိလာရပါတယ်။ ထိုအခါသူသည်သူမည်သို့ကန်နှင့်ပြေးကြောင်းစတင်သည်ကြောင်းကြောင့်နှင့်သူ၏ osico ကြော်သောအဘို့
Ana Paula ဟုသူကပြောသည်
ကျနော့်မော်လ်တာခွေးမှာမနေ့ကခွေးလေးကောင်ရှိတယ်။ ၂ ယောက်သေတယ်။ သူတို့ကအချိန်မတန်ဘဲမွေးဖွားလာတယ်။ တစ်ယောက်ကကော်လီကာဖြစ်နေတယ်။
Ana paula သို့ပြန်သွားပါ